Sidee Muhiim Ugu Tahay Sawiradu Mawduucaaga Dijital ah? | Martech Zone
Sawirradu waa kala duwanaansho muhiim ah oo aan uga faa'iideysanno qayb kasta oo ka mid ah istiraatiijiyadda nuxurka ah ee aan ugu farsameeyo macaamiisheenna. Waxaan ku qarashgareynaa wax badan, xitaa ka badan, naqshadeynta garaafyada iyo sawir qaadayaasha in ka badan inta aan ku bixinno baaritaanka iyo qoraalka. Soo noqoshada maalgashiga ayaa had iyo jeer waxtar leh.
Gaar ahaan sawirada, macno malahan aniga in shirkad ay ku qarash gareyso $ 5k ilaa $ 100k degel cusub laakiin ka boodi doonto inaad dhowr boqol oo doolar ku bixiso sawir qaade. Sawirada dhabta ah ee dhismaha, booska, iyo dadka kujira ururkiina waa kala duwanaan layaableh.
Xogta cusub ee la cusbooneysiiyey ee Xayeysiinta MDG, Waa Dhammaan Waxyaabaha Ku Saabsan Sawirada, Akhristayaashu waxay baran doonaan sababta sawirradu muhiim ugu yihiin guusha suuqgeynta iyo dariiqooyinka ay qaadi karaan si loo kordhiyo saameynta muuqaalladooda.
Macluumaadka, waa wax walba oo ku saabsan sawirrada, wuxuu daboolayaa mowduucyo ay ka mid yihiin:
Saamaynta sawirada maqaallada
Saamaynta sawirrada ee baraha bulshada
Saamaynta sawirrada ee raadinta
Sawirradu waxay saameeyaan wax walba - garashada, aqoonsiga, sharraxaadda, xusuusta, saameynta, iyo xitaa suurtagalnimada in waxyaabaha lagu wadaagi doono warbaahinta bulshada laguna beddelayo natiijooyinka mashiinka raadinta. Waa kuwan qaar ka mid ah tirakoobyada kalifaya:
Xasuusta - Dadku waxay xasuustaan ​​keliya 10% macluumaadka saddex maalmood ka dib markay maqlaan, celcelis ahaan; ku darista sawirku waxay hagaajin kartaa dib u soo celinta ilaa 65%
Aqoonsiga - Ku dhowaad saddex-meelood laba meel dadku waxay yiraahdaan inay yihiin bartayaal muuqaal ah
Aqoonsiga - Macaamiisha aad ayey ugu dhowdahay inay si wanaagsan uga fikiraan xayeysiisyada xoogga saaraya sawir qaadista, xayeysiisyada xoogga saaraya qoraalka
Saameynta - Mawduucyada leh sawirrada ku habboon waxay helayaan 94% aragtiyo dheeri ah, celcelis ahaan, marka la barbar dhigo maqaallo aan sawirro lahayn
Wadaagga Bulshada - Sawirada Facebook waxay helayaan 20% kaqeybgal badan fiidiyowyada iyo 352% hawlgal ka badan xiriiriyeyaasha
Search matoorada - 60% macaamiisha ayaa sheegaya inay u badan tahay inay tixgeliyaan ama la xiriiraan ganacsi leh sawir muujinaya natiijooyinka raadinta maxalliga ah
Tags: garaadkaContent SuuqImagesaamaynta sawirkaadeegsiga sawirkaimagessaamayntainfographicxusuustaraadinta dabiiciga ahaqoonsiSuuq Goobidsawirada bulshadawadaagista bulshada